कोरोनाबाट नेपालमा २२८ जनाको ज्यान गयो, जम्मा सक्रमित ३९ हजार ४६० — onlinedabali.com
कोरोनाबाट नेपालमा २२८ जनाको ज्यान गयो, जम्मा सक्रमित ३९ हजार ४६०
स्वस्थ्य तथा जनङसख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ८९९ जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । आजको सहित नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३९ हजार ४६० पुगेको छ ।
त्यस्तै आज काठमाडौं उपत्यकामा थप २९८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका जनाएको छ । तिनिहरु काठमाडौंका १९० जना, भक्तपुरका ४१ जना र ललितपुरका ६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी नेपालमा कोरोनाका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जनाको ज्यान गएको छ । आजको सहित जम्मा ज्यान गुमाउनेको सख्यां हालसम्म २२८ पुगेको छ ।
आज देशका विभिन्न प्रयोगशालामा ११ हजार १२९ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १७ हजार ८२२ रहेको छ । आज देशभर सात हजार ३३७ जना क्वारेन्टिनमा छन् । यस्तै आज थप ५८८ कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । आज सम्म कोरोना जितेर घर फर्किनेको सङ्ख्या २१ हजार ४१० पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट काठमाडौं उपत्यकामा आइतबार ४२९ सहित थप १ हजार २ सय २१ जनामा कोरोना संक्रण पुष्टि भएको थियो । हिजो ३७२, ललितपुरमा १२ र भक्तपुरमा ४५ जना संक्रमित थपिएका थिए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार हिजो देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ३४८ महिला र ८७३ पुरुष गरी जम्मा १ हजार २ सय २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, हिजो २६७ जनाले जितेर घर फर्किएका थिए । हिजो मात्र १४ जनाको ज्यान गएको थियो । तिनिहरु ४ महिला र १० पुरुष
हिजो केन्द्रीय कारागार, सुन्धाराका ५० जना कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । काठमान्डौ उपत्यकामा संक्रमितलाई उपचारका लागि गंगालाल, ट्रमा, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतमा लैजाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यहीँबाट संक्रमण फैलएको हुनसक्ने बताएका िथए ।
मौसम बदलीः वर्षा र हिमपातको सम्भावना, आन्तरिक उडान ठप्प
संसद् विघटनविरुद्धका रिटमाथि आजपनि सुनुवाइ हुँदै, बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान माग
हुम्लाका सातै गाउँपालिकामा शुक्रबार प्रचण्ड–माधब समुहको प्रशिक्षण हुने
गोपाल किरातीको आधार क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको भव्य भेला
डेनियल कटवालको डिजाइनमा नीलडेभिड्सको नया फ्रेन्चाइजी मोडलको उद्घाटन